Iindaba -Izonyango zaseHwatime ziye kwi-2019 Istanbul International Medical Exhibition Expeded
Umboniso we-2019 Istanbul International Medical Exhibition Exomed uvulwe kakhulu kwiziko leMiboniso i-Istanbul TUYAP nge-28 kaMatshi. I-Hwatime Medical, njengomthengisi obalulekileyo wezixhobo zonyango zamanye amazwe, yenze idrafti yayo kwi-24th Turkey Istanbul Exhibition.
Njengobulungisa obukhulu eTurkey nase-Eurasia apho izixhobo zonyango, izixhobo kunye neetekhnoloji zibonisiwe kwaye iindlela zakutshanje zonyango kunye neziganeko zesayensi zinokulandelelwa, i-EXPOMED EURASIA idibanisa abenzi bezigqibo kwishishini lokhathalelo lwempilo ukusukela nge-Matshi 28 ukuya kwi-30, 2019 ngo Istanbul ixesha lama-26. Bebonke bangama-850 ababonisi abasuka kumazwe angama-42 abazimase lo mboniso kwaye iingcali zecandelo ezingama-35,832 ezibandakanya abatyeleli abangama-6,104 bamazwe aphesheya abasuka kumazwe angama-90 batyelele umboniso ofumene amanqaku apheleleyo kubabonisi nakwiindwendwe.
Kwiminyaka engama-25, i-EXPOMED ibingumboniso okhokelayo kwingingqi yoHlalutyo lwezoNyango, ukufumanisa isifo, unyango, iimveliso zokubuyisela kwimeko yesiqhelo, izixhobo, iiNkqubo, iTekhnoloji, izixhobo kunye nezixazululo zezibhedlele. Njengomsitho wokhathalelo lwempilo waseTurkey, i-EXPOMED ibeka abathengisi kwicandelo lezonyango ubuso ngobuso kunye nabenzi bezigqibo eziphambili eTurkey nakwiimarike ezikufutshane zase-Eurasia.
Lo mboniso liqonga elibaluleke kakhulu kwiHwatime Medical ukuvula imakethi yaseTurkey, ukuhlalutya imeko yentengiso yangoku kunye neendlela ezizayo zabathengi, kunye nokubonelela ngemveliso yokujonga esweni.
Ukuthatha inxaxheba kulo mboniso, uHwatime Medical wenze amalungiselelo apheleleyo kuyo yonke imiba, ngakumbi kwinkalo yokusebenza kwemveliso. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu ziye zanconywa ngabathengi, kwaye iHwatime Medical ifumene iziphumo ezonelisayo kakhulu kulo mboniso. Ngokuboniswa kokusebenza kwemveliso, abathengi banokuqonda okungaphezulu kweemveliso kunye neenkonzo zeHwatime. Inani elikhulu labathengi livakalise injongo eyomeleleyo yokusebenzisana. Abanye abathengi benze intengiselwano, kwaye abanye abathengi bayalela iiyunithi ezingama-500 zokubeka esweni kwangoko.
Ngalo mboniso, abathengi bethu bandise ukuqonda kwabo iimveliso zeHwatime kwaye bandise imakethi yelizwe jikelele yabahloli. Turkey International Medical Exhibition, igqityiwe ngempumelelo.
Ixesha Post: Apr-04-2019